पूर्वमेयरको घरमा १३.५ टन सुन बरामद, प्रहरी नै अचम्मित
काठमाण्डौ । एक व्यक्तिले कतिसम्म सुन सञ्चित गरेर राख्लान् ? ५ किलो, १० वा २५ किलो। प्रश्न उठ्ला यत्रो सुन एक व्यक्तिसँग कहाँबाट हुन सक्छ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । किनकि बहुमूल्य यो पहेँलो धातुको बजारभाउ आजको मितिमा तोलाकै ७० हजार रुपैयाँ छ । एक केजीमा लगभग ८९ तोलाको हाराहारीमा हुन्छ । यदि तपाइँसँग ५ किलोमात्र सुन छ भने त्यो ४४५ तोला...
दुई डिस्टीलरी सञ्चालकलाई रु. ३१ करोड जरिवानासहित १ वर्ष कैद
पर्सा । अन्तःशुल्कको स्टिकर हिनामिना गरी करोडौँ राजश्व छल्ने जिल्लाका दुई डिष्टीलरी सञ्चालकलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले रु ३१ करोडभन्दा बढी जरिवानासहित एक–एक वर्ष कैद गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित जयश्री धौलागिरि डिष्टीलरी र उदयपुर डिस्टलरीले अन्तःशुल्कको स्टिकर हिनामिना गरी राजश्व छलेका प्रमाणित भएकाले उक्त...
राजश्व छली आरोपमा तीन कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध रु ३६.२४ करोडबराबर बिगोसहितको मुद्दा
काठमाण्डौ । राजश्व छली गरेको आरोपमा तीन व्यावसायिक कम्पनीका सञ्चालक तथा सहयोगीविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले ती कम्पनीबाट झण्डै रु ३६ करोड २४ लाख बिगो कायम हुने गरी सजायको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । झुट्टा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गर्ने काठमाण्डौको एएस हार्डवेयरका सञ्चालक सरला...
काठमाण्डौ । कर फछ्र्यौट आयोगका २ अधिकारी अदालतले माग गरेअनुसार धरौटि रकम जम्मा गर्न नसकेपछि जेल चलान भएका छन् । तर, सोही आयोगका सदस्य सचिव तथा राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा बयान दिन समेत नआई अटेर गरेर घरमै बसिरहेका छन् । कर फछ्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकालसँग विशेष अदालतले जनही...
पदच्यूत गोपाल खड्का सर्वोच्चमा, कार्यकाल डेढवर्ष बाँकी रहेको जिकिर
काठमाण्डौ । सरकारद्वारा भ्रष्टाचार र गुटबन्दीको आरोपमा बर्खास्त नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुुगेका छन् । उनले बुधबार सरकारले आफूलाई बर्खास्त गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले सरकारको निर्णय कानून विपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेशको...
काठमाण्डौ । पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा खरीदको क्रममा भ्रष्टाचार गरेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेको छ । आफ्नो अमेरिका भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार आयोजना गरेको मन्त्रीपरिषद बैठकले आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाको सिफारिस र आपू�...
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन सञ्चाल तथा संभार विभागका पूर्व महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड ८८ लाख ८२ हजार बढीको भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहदा मर्यादा विपरीत कार्य गरी स्रोत पुष्टि हुन...
काठमाण्डौ । सरकारी कार्यालयहरुमा हुने घूसखोरीको मामलामा यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयहरु प्राय बदनाम छन् । पछिल्लो समय केही यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यमा ठूलो चलखेल भइरहेको खबरहरु सार्वजनिक भइरहेको समयमै यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पवन सुवेदी निलम्बनमा...
सोझा लगानीकर्तालाई पेल्ने बैंक अर्ब पचाउने यिनलाई किन समाउँदैन ?
काठमाण्डौ । तरलताको कारण देखाउँदै बैंकहरुले सोझा लगानीकर्तालाई चेपेको धेरै भयो । सेयर लगानीकर्ता तथा अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ता समेत भनेजति ऋण नपाएर प्याक प्याकी परिरहेका छन् । थोरै ऋण लिएका साना सेयर लगानीकर्ताहरुले समेत मार्जिन कलको बाध्यता सामना गर्नु परिरहेको छ । लगानी गर्न खोज्दा बैंकले ऋण नदिने, लिएको थोरै ऋण तिर्न थोरै ढिलो...
काठमाण्डौ । समाजकल्याण परिषद्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लगि जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसइटीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ । अस्थयी टहरामा पीडित जाडोले काँपिरहेका बेला रेडक्रसले भूकमपपीडित कोषको रकम दुरुपयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि परिषद्ले छानबिन गर्ने भएको हो । भूकमपपछि...
काठमाण्डौ । वस्तुगत तथ्य एवम् तथ्याङ्कको अभावमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत पुगेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा पहिचानको क्रमबाटै अनियमितता सुरु हुने, सर्वेक्षण तथा योजनाको अवधिमा त्यस्तो प्रवृत्ति मौलाउने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै...
काठमाण्डौ । सिरहाको लहान बजारलाई भारतसँग जोड्ने लहान–ठाडी सडकमा कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ । लहान अस्पताल चोकदेखि १८ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकको पाँच किलोमिटर खण्ड तीन वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानको रेकर्डमा छ । वास्तविकता भने अर्कै छ । सो खण्डको एक किलोमिटर सडक हालसालै कालोपत्रे गरिएको...
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कमाइ खाने भाडो बनाउने र आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै मुलुकको सम्पत्ति प्रयोग गर्दै आएकाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि भ्रष्टहरुको निद हराम भएको छ । प्राधिकरणलाई दुहुनो गाइ बनाएर लुट्ने पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले नै सबैभन्दा बढी दोषी पाइएको छ...
काठमाण्डौ ।विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक तथा नयाँ शक्ति नेपालका नेता ऋषिदेव भट्टराईलाई बुधवार २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भूपेन्द्रप्रसाद राई र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको इजलाशले २० लाख लिएर उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग...
काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा केही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीमाथि छानविन शुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार, केही सचिव र उच्च अधिकारीको बैंक लकर र खाता रोक्का भइसकेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव...